Soomaaliland iyo Ethiopia oo ka shiray soo celinta duulimaadkii Ethopian Air ee la hakiyey – Radio Daljir
Seteembar 21, 2013 2:02 b 0
Adis-Ababa, September 21, 2013 – Maamulka Soomaaliland ayaa dadaal ugu jira soo celinta duulimaadkii shirkada Ethopian Air, taas oo hakad gelisay howlihii duulimaadyada ee ay ka samayn jirtay Hargaysa iyo Berbera.
Wasiirka arrimaha debeda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis ayaa Adis-Ababa kula kulmay wasiirka arrimaha debeda ee Ethopia Dr. Tedros Andhanom, iyadoo kulanka intiisa badan lagu gorfeeyey adkaynta xiriirka ganacsi.
War-saxaafadeed ka soo baxay Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Ethopia iyo Soomaaliland ay ka shireen sidii dib loogu soo celin lahaa duulimaadyadii shirkada Ethopian air, waxaana jira is afgarad aan weli la shaacin.
?Labbada wasiir waxay isla meel-dhigeen xiriirka ganacsiga ee labbada dhinac, iyo soo celinta duulimaadkii shirkada oo hakad ku yimi, taas oo saamayn ku yeelatay dad badan oo raaci jiray diyaarada, sidoo kale dhinacyada wada-shaqaynta iyo nabadgelyada ayaa laga? wada-hadlay? sida lagu sheegay war-saxaafadeedka.
Soomaaliland ayaa dadaal ugu jirta in la soo celiyo duulimaadkii shirkada Ethopian Air ee magaalada Hargaysa.
Khasaaraha ka dhashay Carra-kaawo xoogsato ku duntay Muqdisho oo sii kordhaysa iyo baaris socota